Gaudí - dia mamakivaky ireo asany lehibe toa an'i Casa Batlló | Fitsangatsanganana tanteraka
Casa Batlló sy ireo sangan'asa goavambe Gaudí izay azonao vangiana
Antoni Gaudí dia iray amin'ireo mpanao mari-trano lehibe ary ny solontena ambony indrindra amin'ny modernisme espaniola. Araka izany, namela lova lehibe ho antsika izy izay azonao vangiana anio mba hitohizanao ny fiderana ireo sanganasany, izay tsy hamela anao tsy hiraharaha izay fantatray. Ny iray amin'izy ireo dia Casa Batlló fa manana maro hafa izay tsy maintsy fantatsika na hanakaiky kokoa.
Noho izany dia nisafidy ny hanao a dia virtoaly amin'ny alàlan'ny sangan'asa malaza indrindra sy an-tsaina indrindra an'ny jeneraly. Izy rehetra dia samy manana izany famaranana manokana, mamorona ary an-tsaina izany izay manome azy ireo valiny tokana. Zavatra iray nampiavaka azy ho maoderina manokana. Handeha hanangona entana izahay satria hanao dia lavitra!
1 The Sagrada Familia avy amin'i Antoni Gaudí
5 Ny Capricho an'i Gaudí
6 Trano Booties
The Sagrada Familia avy amin'i Antoni Gaudí
Ny basilica any Barcelona dia iray amin'ireo asa be mpitsidika indrindra, ary nanomboka ny fananganana azy tamin'ny 1882, mba ho iray amin'ireo fiangonana avo indrindra eto an-tany. Na dia manana maro aza izy dia azontsika atao ny milaza fa sangan'asany lehibe io. Izany dia nibodo azy nandritra ny taona maro tamin'ny fiainany ary, niaraka tamin'izay, nahatratra ny vanim-potoana voajanahary izy, efa tamin'ny dingana farany tamin'ny asany, izay ho famintinana lehibe an'ireo rehetra voalaza etsy ambony. Ny lehibe indrindra amin'ny tempoly dia natao tamin'ny fomba voajanahary afa-tsy ny ampahany amin'ilay crypt izay tao Neo-Gothic. Ny endrika géometrika dia tsy tokony ho tsy ampy, ary koa ny tsy fitoviana amin'ny natiora dia tsy ampy. Raha mbola tsy namangy azy ianao dia tsy azonao atao ny mandiso an'io fotoana voatondro io Antoni Gaudí!
Amin'ity tranga ity dia miresaka momba ny fanavaozana tranobe iray, hita ao amin'ny Paseo de Gracia any Barcelona izahay. Azontsika atao ny milaza fa ao anatin'ny vanim-potoana voajanahary an'i Gaudí isika, izay nanatontosany ny fombany manokana ary avy amin'ny natiora ny aingam-panahiny. Rehefa nilaza izany, ny fitsidihana an'i Casa Batlló dia mety ho iray amin'ireo toerana tsara indrindra ho an'ny sainao. Fa maninona Eny, satria ny fitsidihana dia mety ho mifandray be noho ny faharanitan-tsaina artifisialy, feo binaural na sensor mihetsika. Raha atao teny hafa, fomba fampidirana ao amin'ny tontolon'i Gaudí, ny fahitana ny zavatra hitany na ny fahatsapany ny zavatra tsapany tamin'ny fampisehoana audiovisual iray. Izy io dia traikefa tsy manam-paharoa izay hamaly ny fanontaniana toy ny inona ny aingam-panahiny, ny fomba namoronana an'io sary an-tsaina ny manam-pahaizana io sy izay rehetra nanodidina azy.
Amin'ity fitsidihana ity dia hamaly ireo rehetra ireo ianao sy ny maro hafa. Satria hahita efitrano fandraisam-bahiny ianao ka hankafy efijery arivo mahery. Ao amin'izy ireo ho hitanao ny tsiambaratelony rehetra momba ny niandohany tao amin'ny 'Gaudí Dome'. Saingy tsy ny fahitana ihany no ho ampy, fa ny feo tsara indrindra hanodidna anao noho ireo fantsom-peo 21 izay misambotra ny fanahin'ny natiora ary mazava ho azy, ny vinavina volumetrika, izay ho mihoatra ny tena izy ny majia.
Rehefa avy nankafy ny fiandohany na ny niandohany, dia fotoana tokony hidirana ao an-tsain'i Gaudí ihany koa. Zavatra toa sarotra tokoa! Fa miaraka amin'i Gaudí Cube, ho tratra izany. Efitra vaovao iray misy kioba LED misy lafiny 6. Miaraka amin'izany ianao dia ho afaka hanova ny fomba fahitana rehetra ny zava-misy, hitondra anao any amin'ny tontolo hafa, amin'ny nofinofy iray, fa manampy anao hatrany amin'ny fahatsapana rehetra, nefa tsy manadino fa ao an-tsain'ny jeneraly isika. Mazava ho azy, ho an'ity, misy asa fikarohana feno ao ambadik'izany. Nisy sary namboarina natao, ary koa ny soratra na ny sary ary ny fitaovana hafa izay, noho ny fanampian'ny faharanitan-tsaina, no nanome aina an'ity tetikasa ity. Ho hitantsika amin'ny masony sy ny marika navelany ho an'izao tontolo izao ny zava-misy.
Rahoviana isika no miditra ao amin'ny Batlló House, hankafy ny sasany isika vinavinan'ny fiainany, sarin'ny taloha ary izany rehetra izany dia fomba iray handehanana amin'ny androny. Ny zava-baovao iray hafa dia ny fanatonana sary hosodoko fotsiny dia hanomboka famokarana horonantsary kely ireo sensor mihetsika izay apetraka ao anatin'izany ary hahita vaovao misimisy momba ny trano sy ny votoatin'ny fianakaviana. Mba hamaranana ny fankafizany ny lovany rehetra fa amin'ny olona voalohany, fanaovana azy ho traikefa mahagaga izay tsy maintsy iainana, farafaharatsiny, indray mandeha amin'ny fiainana iray manontolo. Sahy mahita ny tsy ampoizina ve ianao?
Ao amin'ny Mount Carmelo, avaratra andrefan'ny Barcelona, ​​no ahitantsika Park Güell, izay iray amin'ireo sanganasa malaza indrindra any Gaudí. Rehefa mahita azy isika dia fantatsika fa miditra amin'ny vanim-potoana voajanahary koa izy ary mankafy fomba manokana. Ao no ahitantsika ny zoro manokana indrindra toy ny loharano San Salvador de Horta na ny fomba fijerin'i Joan Sales, avy aiza ianao no afaka mankafy ny fahitana an'i Barcelona. Efa eo am-baravarana na eo amin'ny pavily ihany no ahafahantsika mankafy ny fomban'ny jeneraly indrindra. Iray amin'ireo toerana tokony hitsidihana anao koa ary raha efa nanao izany ianao dia tsy mankarary mihitsy ny fitsangatsangana amin'ny faritra.
Na dia manana ny lanjany sy ny fahombiazany aza ny tetikasan'ny mpanao mari-trano rehetra, amin'ity tranga ity rehefa miresaka isika Casa Vicens, tsy maintsy ambarantsika fa io no iray amin'ireo asa voalohany nataony taorian'ny nandalovany ny maritrano. Ka angamba, mbola manome lanja bebe kokoa aza, raha azo atao. Noho io antony io dia azontsika atao ny mametraka azy io amin'ny vanim-potoana orientalista, satria manana ireo fantsom-panafody tatsinanana izay tena nahaliana an'i Gaudí tamin'ny fahazazany. Trano iray izay nambara fa Toerana mahaliana ny kolontsaina ary avy eo dia toerana iray lova manerantany tamin'ny taona 2005. Mamela loko mareva-doko eto amin'ny façade isika, noho ny fahavitan'ny tanimanga.
Ny Capricho an'i Gaudí
Na dia marina aza fa ny ankamaroan'ny asany dia ao Catalonia, amin'ity tranga ity dia tsy maintsy horesahintsika 'whim' izay nankany Comillas any Cantabria. Tokony haorina amin'ny vanim-potoana atsinanan'ny Gaudí ihany koa izy io, izay ny taila tanimanga no tena mpiaro azy, ankoatry ny tohana sy ny biriky. Araka ny efa fantatrao, ity tranobe ity dia navadika ho tranombakoka, satria tsy mahagaga izany. Amin'ny fankafizana ny endrika ivelany fotsiny dia hahasarika anao!
Hatramin'ny nanokafanay ny varavarana niaraka tamin'i El Capricho, dia manaraka akaiky koa izy ny Casa Botines. Satria iray amin'ireo fananganana hafa izay any ivelan'i Catalonia sy manokana kokoa ao León. Amin'ny niandohany maoderina, trano fitehirizam-bokatra ary trano itoerana tamin'ny taona voalohany niainany. Fa efa tamin'ny 1969 dia nambara ho tsangambato manan-tantara momba ny fahalianana ara-kolontsaina, naverina tamin'ny laoniny tamin'ny 1996. Androany dia misy tranombakoka ihany koa nefa mitazona ny hakanton'ny taloha, ny votoatin'i Gaudí ary ny taratry ny fahalalàny. Iza amin'ireo no notsidihinao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Casa Batlló sy ireo sangan'asa goavambe Gaudí izay azonao vangiana
Fiteny manan-danja indrindra any India